Samsung yakachinjisa iyo Galaxy S20 akateedzera kumusoro giya. Panzvimbo pekupa bhajeti modhi kutsiva iyo S10e, isu takave nekuwedzera kumucheto wepamusoro ne S20Ultra - foni yepamusoro-soro, yakagara padivi peGPS S20 uye iyo Galaxy S20 +.
Asi pane zvakawanda zvekusvika pakubata nazvo: Samsung inopa zvimwe zvinhu kupfuura chero ani zvake kunze kwebhokisi, saka zviri nyore kukanganwa kana kusambowana mamwe ematombo akavanzika. Isu takabvarura nharembozha kuti tibatanidze pamwe gwara rakadzama rezvose zvichaitwa neako S20 mudziyo uye nemabatiro aungaite.
Samsung Galaxy S20 yepamusoro chipikiri: Kana iwe uchinetseka kutsvaga zvinhu, Rova pasi pasi nekukurumidza marongero uye iwe unowana yekutsvaga sarudzo kumusoro. Ingo tanga kunyora zvawatsvaga uye izvi zvinotsvaga kwese kwese kudzosera mafoni, maapplication, vanofambidzana, kugadzwa kwekarenda. Izvo zvine simba chaizvo. Iwe unogona zvakare kuitangisa nekuunza iwo maapplication tireyi, uye nekugogodza yekuwana bar kumusoro.
Maitiro ekudzima kana kudzosera iyo Samsung Galaxy S20: Samsung yakagadzirisazve kiyi yepasirosi paS20, saka muchina wokudhinda murefu uchagadzikisa Bixby nekungogadzikana, pane simba kubva pane chinhu chinenge (chingangoita) dzimwe runhare pasi. Kuti ubvise foni, siyaira pasi nekukurumidza nekuisa panomira chiratidzo chemagetsi ipapo. Ipapo iwe unogona kudzima foni. Pane iyo skrini zvakare ipfupi kune iyo kiyi kiyi zvigadziro kuitira kuti iwe unogona kuchinja basa kana iwe uchida.
Samsung Galaxy S20, S20 +, S20 Ultra yekumusoro screen screen matipi
Chikamu chekuvharira pamba chikamu chekutanga. Ndiko kwaunovhurira foni yako, iyo nzvimbo yezvishoma mapurogiramu nemajeti uye ndipo paunodzoka kana wapedza kuita chimwe chinhu muapp. Zvino kutsigira Android 10, unogona zvakare kusarudza yako yekushambadzira maitiro.
Vhura Android 10 gesture navigation: Nekukanganisa iyo S20 ichapa Samsung matatu matatu mafoni ekufamba. Kana iwe uchida kuchinjira kuApple 10's gestures yakavhurika marongero> kuratidza> yekufambisa bar. Pano iwe une sarudzo yemabhatani kana yakazara skrini chiratidzo. Unogona kubaya pane "zvimwe zvingasarudzwa" kuti ushandise, asi nemavara akazara echiratidzo foni yako inozokurega uchitsvedza kubva kudivi kuti udzokere, kubva pasi kuenda kumba, kungofanana nemamwe madivayiri eApple.
Rongedza bara rekushandisa: Kana iwe uri kunamatira ne-on-screen yekufambisa zvinodzora, unogona kugadzirisa iwo marongero. Musoro muzvirongwa> kuratidza> yekufambisa bar uye iwe unogona kuchinja marongero emabhatani.
Rongedza yako chidzitiro imba: Kudzvanya refu pane iyo Wallpaper pane chero imba yekuvhara inoita kuti iwe ugone kugadzirisa iyo Wallpaper, zvinyorwa, majeti, mapeji kana zvimwe zvinogadziriswa. Iyi nharaunda ichaitawo kuti uwedzere kana kudzima zvimisikidzo zvakakwana, saka kana iwe uchida peji yewaidget, ndipo paunoenda kuti uwedzere.
Tora zvimwe pane yako skrini yekumba: Iwe unogona kushandura saizi yeiyo gridhi gridhi pane ako mapfupi uye majeti akagara, zvinoenderana nekukura kwaunoda iyo yekumba skrini kuti ive. Nguva refu pfuurira pane iyo Wallpaper uye sarudza "home screen settings". Sarudza 4 × 5 kuita kuti zvinhu zvinyatsojeka, 4 × 6, 5 × 5 kana 5 × 6 kuti cram yakawanda mukati. Tinowanzo shandisa 5 × 6, zvikasadaro zvinhu zvinotaridzika zvakakurisa, asi izvi zvinosvika pakuda kwako.
Resize widget: Mazhinji mawidget anokanganisa. Muchina wokudhinda unovasarudza. Paunosimudza chigunwe, unogona kudhira bhokisi rebhuruu iro rinooneka uye kudzoreredza wadhi yako. Iwe unogona kunyange kugadzirisa saizi kana kuisa zvakare muGoogle bhokisi rekutsvaga.
Gadzirisa mamiriro ebha: Iyi ndiyo ruzivo inogara pamusoro pechiso. Musoro muzvirongwa> notices> status bar uye une dzimwe sarudzo. Unogona kugumira kumatatu ekuzivisa, kana iwe unogona kuva nezvose. Iwe unogona zvakare kubatidza kana kudzima iro bhatiri muzana.
Bvumira peji rako reimba kuti rishande munzvimbo: Iyi sarudzo inobvumidza iyo skrini yepamusha uye maappuro tray, zvigadziriso, nezvimwe, kuratidza mumamiriro ezvinhu. Yakadzimwa nekutadza, asi iwe unogona kuibatidza mune masetingi> ekumusoro skrini masetini> tenderera kune mamiriro emamiriro. Chinja izvi kuti uwane kutenderera kune nzvimbo, saka kana iwe uchichinja kubva mukutamba kuenda pakuona bhaisikopo haufanire kuramba uchidzokera kumufananidzo.
Gadzira folda: Ingo dhonza imwe app pamusoro peimwe pachiratidziro chekumba uye dura rinogadzirwa. Kuti ubvise Anwendung kubva mufaira, vhura iyo folda uye pfuure pfuurira app uye iwe unowana pop-up menyu iyo inoita kuti iwe ubvise iyo app. Kuwedzera maapplication, kana kuvadhonza mufaira, kana kurova "+" bhatani mukati mefaira kuwedzera maapp.
Chinja ruvara rwechidziro kana zita: Vhura dura uye nyora zita raunoda kumusoro. Kana iwe usingade zita, siya rakashama. Kuti uchinje dhairekodhi remuvara wepamberi, tinya dot iri kurudyi-kona uye sarudza iyo nyowani nyowani - inosanganisira yakazara tsika mavara.
Delete folda: Kana iwe usisiri kuda folda, tinya uye bata uye wobva wabaya kubvisa kubva kumba. Folda uye mapfupi eapp anopera.
Pinda Samsung Zuva nezuva kubva kumba chidzitiro: Kuruboshwe kwechidzitiro chemba, Samsung ikozvino ine chimwe chinhu chinodaidzwa kuti Samsung Daily, icho chinotsiva Bixby Imba. Iwe unogona kushinha kwariri uye ichakupa iwe nhau, mutambo, mamiriro ekunze uye zvinhu kubva kuGreen Store, pamwe nekuwedzera kubva kune mamwe masevhisi iwe aungashandisa seSpotify. Unogona kushandura izvo zvinokuratidza nekuvhura menyu kumusoro kurudyi uye kusarudza makadhi aunoda kuwona.
Dzima Samsung Mazuva ese: Kana iwe usiri kuda Samsung Zuva Nezuva (uye isu hatikupi mhosva), refu pikicha pane iyo Wallpaper uye iwe unozopinda epamba chidzitiro zvinodzora. Rova zvakasimba kurudyi uye iyo Samsung Yemazuva mapaneru ichaonekwa. Pane switch yekuchinja kumusoro kwepamusoro-kona kona. Kana iwe usiri kuda iyo Samsung Mazuva ese mapaneru pane yako yekumba skrini, ingo dzima izvi. Zvinosuruvarisa, haugone kuchichinjira kune chimwe chinhu pasina kushandura chinotanga.
Shandura launcher (imba yechidzitiro): Iwe unogona kushandura zviri nyore ruzivo rwefoni yako nechimwe chakatangisa, senge Nova, kana iwe uchida mamwe maitiro. Ingo dhawunirodha Launcher kubva kuGoogle Store woiisa. Kana iwe ukadzvanya bhatani repamba iwe unozopihwa sarudzo yekusarudza nyowani default launcher. Kana, tungamira muzvirongwa> maapplication uye rova ​​bhatani remenyu kumusoro kurudyi. Sarudza "default apps" uyezve "kumba app". Iwe uchaona yako sarudzo yeanofambisa ipapo, sarudza iyo iwe yaunoda. Ongorora: kana iwe uri kushandisa Android 10's gesture navigation, izvi hazvitsigirwe neyechitatu-bato maruneti, saka unogona kuzodzosera kushandisa matatu mabhatani ekudzora.
Ratidza mazano eappu mumaapps apfuura. Paunobaya bhatani rezvazvino reapplication, kana zvishoma nezvishoma swipe kumusoro kana uri kushandisa Android 10 maekisesaizi, iwe unowana zvigunwe zvemapeji ako eazvino eapp, asi zvakare mutsetse wemapurogiramu akapihwa pasi pazasi. Izvi zvinoenderana nezvinoonekwa neGPS S20 zvaungangoda zvichienderana nemaapps achangobva kushandiswa. Kana iwe usiri kuda izvi, saka vhura menyu kumusoro kurudyi mubhawa rekutsvaga uye kudzima "dzakarongedzwa maapplication".
Kutaura-kunze-kunze kwekukurukurirana mune imwe hwindo: Rangarira Facebook Chat Misoro? Samsung inogona kuzviita nekutumira mameseji masevhisi kuGPS S20, ichiburitsa hurukuro kuita bhatani rinoyerera kuti ugone kupindura usingachinje maapplication - chero bedzi iyo app ichitsigira akawanda windows kushandisa. Inodaidzwa kuti "smart pop-up view" uye iwe unogona kuiwana mune marongero> epamberi maficha> smart pop-up maonero. Unogona kushandura iwo maapps aunoda kubuda (isu taimboitira kutumira mameseji masevhisi) uyezve unogona kuvapindura mune rimwe hwindo. Yakadzimwa nekutadza.
Kugadzirisa vabatsiri vako veDigital paGPS S10
Samsung inosundira Bixby semubatsiri wayo wedigital, nepo sefoni yeApple iwe unowana Google Mubatsiri zvakare. Isa Alexa uye iyoyo inova sarudzo - kunyangwe Samsung ichizorega iwe uchiwana Finder uye Samsung Internet zvakare nenzira imwecheteyo. Heano ese manejimendi sarudzo kune avo chaiwo vabatsiri.
Svika Google Mubatsiri: Iyo refu yekutsikirira pane chaipo pa-screen imba bhatani ichavhura Google Mubatsiri. Iwe unogona ipapo kutaura kuGoogle uye uwane ruzivo rwakazara seMountain View yakatarwa. Izvi zvinowirirana neakaundi yako yeGoogle kubva kusaina-kupinda, saka inoshanda nechinhu chero chawakatomisikidza Google Mubatsiri kuti uite. Kana iwe uri kushandisa Android 10 gestures, swipe diagonally mukati kubva kukona yepasi kuvhura Mubatsiri.
Vhura hotera "Ok Google": Izwi rinopisa kuti Google ipindure nezwi rako chete chikamu cheGoogle app, asi uchafanirwa kuribatidza kuti riite. Musoro mukati meiyo Google app, tinya "zvimwe" muzasi kurudyi-kona kona, zvigadziriso> izwi> izwi mechi> hey Google. Chinja pane sarudzo uye chero bedzi paine izwi rinowirirana rakabatana neaccount yako, inokuziva iwe uchitaura uye ikupe izwi kutonga kwefoni yako.
Dzima Google Mubatsiri / vese vabatsiri: Kana iwe usiri kuda Google Mubatsiri pane iyo yekumusoro bhatani nzira, unogona kubvisa kugona kuivhura ipapo. Musoro muzvirongwa> maapplication uye vhura iyo yepamusoro-kurudyi menyu uye sarudza default mapurogiramu. Wobva watungamira mu "assist app", uye pamusoro pa "kifaa rubatsiro app". Iwe zvino uchaona sarudzo yekusarudza "hapana". Tinya sarudzo iyoyo uye hapana chinozoitika nemuchina murefu pabhatani repamba kana kana iwe ukasvetuka kubva kumakona.
Chinja mubatsiri wako wedhijitari kuenda kuAlsa kana Bixby Voice: Kana iwe uchida kuvhura Alexa pane bhatani repamba, isa iyo Alexa app uyezve, sezviri pamusoro, chinja chinokasira chimbo chekubatsira chishandiso kuAki - kana Bixby Voice kana uchida. Izvi zvinozoreva kuti iwe une Alexa kana Bixby yakawanikwa kuburikidza nechiratidziro chekumba pane Google. Iyo hotword yeAkiel haishande.
Tanga Bixby Izwi: Kana iwe uchida kushandisa Bixby, pinda uye bata bhatani repadivi uye Bixby ichavhura. Iwe uchafanirwa kunge watove-mukati kune iyo Samsung account shandisa Bixby. Iwe unogona zvakare kugonesa iro "Hi Bixby" rinopisa izwi. Nzira iri nyore yekuita izvi kuvhura Bixby, swipe kumusoro kubva pasi uye wozovhura menyu kumusoro kurudyi. Izvi zvinounza iyo Bixby Izwi marongero - tinya "izwi kumutsa-kumusoro" uye iwe unozogona kuwana kutonga nezwi rako. Yakadzimwa nekutadza, saka kana usiri kuzoishandisa, siya yakadzimwa.
Govera bhatani rorutivi: Hapasisina bhatani reBixby senge maGlass S mamodheru ekupedzisira aive, pachinongova nebhatani rimwe chete. Musoro muzvirongwa> zvemberi maficha> padivi kiyi. Pano iwe unowana zvese zvasarudzo zveiyo kiyi yepadivi, kuti ugone kubvisa Bixby, unogona kuiisa kuti idzime foni nefoni refu, kuvhura iyo kamera neiri kudhindisa kana kuvhura iyo app yesarudzo yako. Chaizvoizvo, iwe sarudza.
Samsung Galaxy S20 inokurumidza kurongedza matipi uye manomano
Iyo yekukurumidza masystem nzvimbo chikamu cheApple uko iwe kwaunogona kuwana kazhinji kazhinji zvigadziriso zveyako kifaa, senge magetsi ekuchengetedza modhi, Wi-Fi neBluetooth. Iyo sarudzo yemapfupi, akawanikwa kana iwe ukasvetuka pasi kubva pamusoro pechidzitiro pane Samsung foni. Samsung zvakare inowedzera akati wandei ekuwedzera zvinhu pano.
Pakarepo pinda iyo inokurumidza kurongedza uye chiziso pane pane yako skrini yekumba: Rova pasi pasi chero pahwindo repamba uye paziso rezaziso rinotsvedza pasi zvichireva kuti haufanire kutambanudzira kumusoro kwepamusoro peji, tsvaira pasi zvakare uye unowana marongero anokurumidza - anobatsira chaizvo pane yakakura Galaxy S20 + uye S20 Mafoni ekupedzisira. Izvi zvinodzimwa nekutadza, kuti ubatidze paye refu pikicha uye sarudza "yekumusoro skrini masetani", wozo "swipe pasi kuitira ziviso pani".
Gadzirisa nekukurumidza zvigadziro: Kuti uchinje mapfupi aunoona kana iwe uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchingeita, tsvaira pasi kaviri kuti uone gridhi izere, vhura menyu nekutepa iwo matatu madota uye wosarudza "bhatani reti". Iwe unozoratidzwa irwo rwakazara runyorwa rweasarudzo pamapeji. Unogona kudhonza kuti uorder zvekare, kana kubvisa mapfupi ausingade. Nzvimbo yepamusoro: chete matanhatu maapp ekutanga anoratidzwa mune kompakiti ekuona kumusoro, saka gadzira aya ekutanga marongero mapfupi.
Pakarepo pinda zvigadziriso zvemushandisi kubva kumamiriro ekukurumidza: Iyi yakajairwa Android tip, asi yakanaka pakuwana marongero ipapo ipapo. Dhinda uye ubatisise iyo nzira pfupi (semuenzaniso Bluetooth) uye iwe unobva wasvetukira kune izere marongero menyu. Inonyanya kubatsira paWi-Fi, Bluetooth, uye sarudzo dzekuchengetedza magetsi.
Svika zvakabatana zvishandiso mune inokurumidza kugadzirisa pane: Nokutadza iwe unowana izvo zvakabatana zvishandiso uye midhiya zvinoratidzwa mune inokurumidza masisitimu pane zvakare. Izvi zvinoreva kuti iwe unogona kusvetuka pasi uye nekupinda mukati kuti uwane mimhanzi yauri kutamba kana maspika awakabatana nawo. Sarudzo yemidziyo inovhara kubatana kwakananga pamwe ne SmartThings, saka kana iwe uri mushandisi wemumba akangwara iyi ndiyo nzira yekuenda yakananga kune izvo zvishandiso. Iwe unogona kukuwana iwe usinga uye kana uchida iyo sarudzo, kuti iwe ugone kuidzima nekuvhura iyo inokurumidza marongero uye nekukanya menyu kumusoro kurudyi. Wobva wadzvanya pane "inokurumidza mapaneru marongero" uye bvisa pa "show media uye zvishandiso" kuti ubvise.
Kurumidza kugadzirisa chimiro chinopenya: Samsung inoita kuti iwe upinde kupenya kuburikidza nekukurumidza maseteni epaneru, ingo shandura pasi uye iwe uchaona inotsvedza. Kana iwe uchida kugadzirisa autobrightness, rova ​​pasi museve kurudyi-ruoko kumagumo kweslider uye ichakutora iwe wakananga kuenda kune iwo marongero, kwaunogona kuibatidza kana kudzima.
Samsung Galaxy S20 uye S20 + app matipi
Iwo maapplication tray chikamu chekutanga pafoni yako uye inzvimbo inogara mapurogiramu ako eapp.
Ratidzai mapurogiramu ese ari pane yekuvhara kumba: Iyi sarudzo yakakurumbira kune vamwe. Kana iwe uchida kubvisa maapplication tray, pfuurira kwenguva refu pachiratidziro chemumba uye tora "kumba skrini maseteni". Wobva wasarudza "dhizaini repamba" uye iwe uchaona maviri sarudzo, "yekumba skrini chete" kana "yekumba skrini uye maapplication skrini". Iyo yekutanga inobvisa maapplication tray zvachose, seiyo iPhone.
Wedzera kana bvisa bhatani rebhatani reapps: Nekutadza hapana maapplication tray bhatani uye iwe unovhura iwo maapplication tray neswipe. Kana iwe uchida kuti bhatani ridzokere musoro mukati mezviratidziro zvemba senge zviri pamusoro uye sarudza "maapplication bhatani". Pano unogona kuibatidza kana kudzima.
Swipe kuratidza kana kuvanza mapurogiramu eapp: Sezvo pamusoro, iyo Galaxy S20 inoita kuti iwe utarise iwo maappuro tray neswipe kumusoro. Iwo maapplication mapeji pachawo anotenderera kuruboshwe uye kurudyi. Kana iwe uchida kudzokera kune peji remba, haufanire kudzvanya bhatani repamba, unogona kungo tsvaira kumusoro zvakare uye iyo tireyi tireyi inonyangarika.
Chinja mashandiro ehurongwa hwewindo Kufanana nechiratidziro chemumba unogona kuchinja kuwanda kwemapurogiramu muappay tray / peji. Sezvakataurwa pamusoro, enda kumadziro eimba screen, uye iwe uchaona sarudzo ye "apps screen grid", ine anosvika 5 × 6. Iyo yekupedzisira inorongedza mamwe maapplication mu.
Alfabheti yako apps: Mune maapplication tray, rova ​​menyu mune yepamusoro kurudyi-kona, wozo "sarudza". Izvi zvinokupa iwe sarudzo yekuti uve nerufabheti. Ingo bata iyo sarudzo uye zvese zvinowira munzvimbo.
Dzorerazve maapplication: Rova bhatani remenu mukona yepamusoro-kurudyi, wobva wadzvanya “sarudza”. Panguva ino, sarudza "tsika yakarongeka". Iwe unogona ikozvino unogona kudhonza maapplication kuenda kunzvimbo yaunoda ivo mukati.
Gadzira dhaireti yetrayipi yeapps: Iwe unogona kuve nefaira rezvishandiso kunyangwe iwe uri mutsika kana mavara alfabheti. Ingodzvanya uye ubatise icon yeapp uye udhonze pamusoro peimwe uye dhairekita ichagadzirwa. Iwe unogona ipapo kugadzirisa zita uye vara sezvaunoda.
Tsvaga runhare rwako rwese neRitsva: Pamusoro pechirongwa cheapps pane bhawa rekutsvaga reKutsvaga. Izvi zvinodzosera mitsva yekutsvaga yeapps iwe yawakaisa, asi zvakare inogona kutsvaga zvemukati mumaapp, seNetflix, Play Store, mameseji, chiyeuchidzo, karenda uye zvimwe zvakawanda. Tinya iyo Finder bhaa mune maapplication tray, wobva warova bhatani remenu kurudyi wobva "gadzirisa maapplication" uye iwe unogona kusarudza kwainotsvaga.
Tonga izvo zvirongwa zvinotsvakwa neTester: Kana Tsvaga ichidzosera ruzivo iwe rwausingade, ungangoda kudzima mamwe maapplication aanowana. Vhura iyo tireyi tireyi uye tinya menyu kumusoro kurudyi. Wobva wasarudza Finder marongero> sarudza maapplication ekutsvaga mukati. Izvi zvinorega iwe kudzima maapplication ausingade mhedzisiro kubva.
Rega Tsvaga ikupe mazano ezveapp: Kana iwe ukabaya paKutsvaga kumusoro kweapplication tireyi, iwe unobva watora mazano zvichienderana neazvino maapplication awakashandisa. Kana iwe usiri kuda izvi, enda mukati mezvitsvaga zveSe Finder sezviri pamusoro, uye iwe unogona kuzvidzima pasi pe "ratidza mapurogiramu akapihwa".
Uninstall maapplication: Unogona uninstall zvakananga kubva kuapp icon. Ingo pfuurira kwenguva refu pane iyo app uye pop-up menyu inokupa iwe sarudzo yekubvisa iyo app. Kana iri yepamoyo app (iyo iwe yausingakwanise kuburitsa) iyo imwe sarudzo inokutendera kuti udzivise app.
Wedzera zvirongwa kune yako skrini yekumba: Dhinda uye ubatisise pfupiso yeapp muappay tray. Izvi zvinokutendera kuti uise nzira pfupi pahwindo rako rekumusha nekukwevera kumusoro kwepeji, kana unogona kusarudza "wedzera kumba" kubva pane-pop-up menyu inoonekwa.
Rega kuwedzera mifananidzo mitsva yeApple kumba. Musoro mukati mezviratidziro zveimba yekumba (pikicha refu pane iyo Wallpaper) uye iwe unowana mukana we "wedzera maapplication kumba skrini". Dzima izvi, zvikasadaro zvese zveapurogiramu zvaunoisa zvichawedzerwa kuchikona chako chekumba. Kana kuitisa iyo, kana zviri izvo zvaunoda.
Chinja chisarudzika Android inokutendera iwe kuti usarudze kuti ndeipi default app kana iwe uine zvinopfuura chimwe chete zvichaita zvakafanana chinhu. Pasi pemagadziriso> maapplication akarova bhatani remenu mune yepamusoro kurudyi-kona uyezve "default maapplication". Pano iwe unogona kuona izvo zvasarudzwa seye default browser, kufona app, mameseji app uye yekumba skrini. Zvimwe zvinokanganisa zvinosarudzwa neapp yekutanga yaunovhura kune rimwe basa.
Dzora mvumo yeapp: Android inoita kuti iwe ubate zvese mvumo kune yega yega app pane yega hwaro. Enda kumasethingi> maapplication uye sarudza iyo app yaunoda, wobva warova Mvumo. Izvi zvinokutendera kuti uchinje mvumo uye uibvise, kuti ugone kudzima nzvimbo kana vanobatika kuwana, semuenzaniso.
Samsung Galaxy S20 yekukiya skrini uye inogara ichiratidzwa
Iyo yekuvhara skrini ndiyo yaunoona kana foni yako yakavharwa. Yakanyatsopatsanurwa kuita zvikamu zviviri, chimwe kana chidzitiro chakadzimwa - uko "kugara-pachiratidziro" kuchikwanisa kukupa ruzivo - kana iyo yakakodzera yekuvhara skrini iyo skrini izere, asi haugone kuwana chishandiso.
Vheneka nguva dzose pakuratidzira: Kuita kuti iyo skrini iratidze iwe "gara uri pa" ruzivo, enda mukati kukiya skrini> gara uchiratidzira uye woibatidza - yabviswa nekutadza. Izvi zvinoratidza kana iko kuratidzwa kwefoni kuri pakamira, kureva kuti kana kuratidzwa kwacho kwakadzima. Unogona kusarudza kuti ioneke pane imwe purogiramu - pamwe ingo ratidza kana iwe uri padhesiki rako - kana kuratidza nguva dzese kana paunobaya foni yako. Rangarira, inoshandisa bhatiri.
Shandura maitiro anogara achiwachi: Kune akati wandei emhando dzakasiyana mawachi eS10 inogara iri-inoratidzwa. Musoro muzvirongwa> lock screen> wachi wachi. Pano iwe unogona kushandura iyo wachi zvese zvekugara-pane kuratidzwa uye yekukiya skrini. Iwe unogona zvakare kushandura iwo mavara, saka kana iwe usiri kuda mono, unogona kusarudza chimwe chinhu.
Wedzera chinoridza mimhanzi kana FaceWidgets kukiya yako yekuvhara kana kugara uchitaridza-nguva: FaceWidgets ndiro zita rinoshandiswa neSamsung kune rumwe ruzivo pane yako yekukiya skrini kana inogara iri-pane kuratidzwa. Iwe unenge uine mutyairi wemimhanzi ipapo nekukasira, asi kana ukasadaro, tungamira mumasetingi> kukiya skrini> FaceWidgets. Pano iwe unowana dzese sarudzo dzekubatidza uye kudzima, kusanganisira Bixby Maitiro, mamiriro ekunze, maalarm uye mashedhiyo.
Chinja kupenya kwerinoratidzwa nguva dzose: Izvi zvakabatana nekupenya kwemotokari pafoni yako, zvisinei iwe unokwanisa pamusoro-kukwira izvi kumisikidza kupenya pachako. Musoro muzvirongwa> lock screen> always-on display. Mukati meiyi menyu muchaona "auto kupenya". Dzima izvi uye iwe unogona kuseta kupenya iwe pachako. Iwe unogona zvakare kushandura kupenya pamurume nekukanda pane inogara iri-pachiratidziro kana ichinge ichiratidza.
Shandura kukiya chidzitiro mapfupi: Unogona kuve nepfupi mbiri pakiyi yekukiya kuti uwane nekukurumidza (chete iyo yekuvhara skrini, kwete iyo inogara iri-inoratidzwa). Idzi foni uye kamera nekutadza, asi zvinogona kuva chero chinhu chaunoda. Musoro muzvirongwa> kukiya skrini> mapfupi. Pano unogona kusarudza mapfupi ekuruboshwe uye kurudyi, kana kudzima zvachose.
Dzivirira / gonesa zvidzitiro zvekuvharira skrini: Kana iwe usiri kuda kuziviswa pane yako yekukiya skrini, tungamira kumasetingi> kukiya skrini> notisi. Izvi zvinokutendera kuti uvanze zvemukati, zvinongoratidza maapponi eapp kana kudzima zviziviso zvachose. Zvakare, kana iwe uchida zviziviso zvine zvemukati, usasarudze kuviga.
Shandura kutaridzika kwekukiya skrini notisi: Kwete chete iwe unokwanisa chete kushandura iyo ruzivo iwe yaunoratidzwa pane iyo yekuvharira skrini, asi iwe unogona kushandura kuti inoonekwa sei. Musoro muzvirongwa> zvechizarira screen> notices uye iwe unogona kushandura iko kujekesa kwekiyi yekuvharira ziviso. Iwe zvakare unogona kuve nechinyorwa chinodzoserwa saka chinomira zvakanyanya kupesana neshure.
Ratidza wachi inotenderera panevharo rekukiya: Chimwe chezvinhu zvakanakisa pane mafoni ndechekuti zvinoshandura zvega zvenguva yemuno, asi wachi inotenderera inogona kukuratidza nguva yako yekumba. Musoro muzvirongwa> lock screen> roaming clock. Iwe unogona zvakare kusarudza kuti yako nguva yekumba iri kupi.
Samsung Galaxy S20 yakatevedzana kuchengeteka uye kuvhura
Kuchengetedza kunoramba kwakakosha sezvakamboita, ne Samsung inopa huwandu hwesarudzo dzekuvhura.
Nzvimbo yepamusoro yekuchengetedza: Biometrics haisi yeupenzi, nekuti pavanokundikana mudziyo wako unodzokera kuPIN kana password kuti uvhure. Naizvozvo, mudziyo wako unongo chengeteka se password kana PIN yaunoshandisa, sezvo chero munhu achiedza kupaza foni yako achigona nguva dzose kusarudza kutungamira kunzira idzi dzekuvhura. Biometrics iripo kuitira nyore, kwete chengetedzo.
Ita kuti zvigunwe zvigunwe kana kuchengetedzwa kwechiso: Kuti ushandise chigunwe chako kana kumeso kuvhura, tungamira mumasetingi> biometric uye chengetedzo. Pano unogona kunyoresa kumeso kwako kana zvigunwe. Iwe unofanirwa kuseta yekudzosera-kumusoro PIN kana password panguva imwechete kuti upe kumwe kuchengetedzeka. Nzvimbo yepamusoro: kana uchishandisa zvigunwe zvemunwe, zvino nyoresa minwe paruoko rumwe nerumwe kuti ugone kuvhura zvisinei uri kubata foni yako.
Tinya iyo skrini kuratidza nzvimbo yeminwe scanner nzvimbo: Iwe unogona kuve neyekunyorwa kweminwe kuvhenekera nekutepa foni, kuti iwe uzive kwekuivhura. Musoro muzvirongwa> biometric uye chengetedzo> zvigunwe. Tinya muPIN yako kana password, wobva wananga ku "show icon kana screen iri off". Iwe unogona ipapo kusarudza kubaya iyo skrini uye iyo chigunwe chigunwe chiratidzo chichaonekwa kuratidza iwe waifanira kudzvanya.
Instant Lock: Paunodzvanya bhatani rekumira, iwe unoda kuti foni yako ivhare ipapo ipapo. Musoro muzvirongwa> zvechizarira screen> chengetedzo yekukiya masystem. Iko kune sarudzo yekukiya iyo mudziyo nekukurumidza kana iyo skrini ichienda kunorara kana kana iwe ukadzvanya bhatani rekumira. Kana iwe uchida kunonoka, pane yakawanda nguva sarudzo.
Smart Lock / Bluetooth kuvhura: Zvekare muzvirongwa> zvechizarira screen> pane iyo Smart Lock chikamu. Ichi chiyereso cheiyo Android ficha uye iwe une sarudzo yekusarudza maturusi akavimbika, saka yako Android ichavhura kana yakabatana nechimwe chinhu. Iwe unogona kusarudza madhiraivhu eBluetooth (senge smartwatch yako kana mota), nzvimbo, izwi rakavimbika uye zvichingodaro. Bhonasi Tip: Iyi inongova imwe yenzvimbo dzoga muSamsoni Imwe UI kwaunodzokera kuchitoro cheAroid visuals!
Ingopukuta chako mudziyo: Kana iwe uchinetseka nezve foni yako kuwira mumaoko asiri iwo uye kutsemuka, iwe unogona kuitisa otomatiki kupukuta. Musoro muzvirongwa> zvechizarira chidzitiro> chengetedzo yekukiya marongero. Pano iwe unowana iyo sarudzo yeku auto fekitori reset kana gumi nemashanu zvakakundikana kuvhura kuyedza kunoitwa.
Kiya network uye kuchengetedza mabasa: Iyi sarudzo inoreva kuti maratidziro ako enetiweki haagoni kuchinjwa foni yako yakavharwa. Izvi zvinoita kuti zvive nyore kuwana yako foni kana yakabiwa. Nekudaro, zvinorevawo kuti iwe unofanirwa kuvhura foni yako kuti ubatanidze ndege modhi. Musoro muzvirongwa> lock screen and security> safe Lock settings kuti uwane mukana wekubatidza kana kudzima.
Encrypt yako SD kadhi: Kana iwe usiri kuda kuti vanhu varatidze kubudikidza neako SD kadhi kana vakaiburitsa kunze kwefoni, saka unogona kuinyora. Ipapo inogona kungoverengwa pane yako yakavhurwa foni. Musoro muzvirongwa> biometric uye chengetedzo> encrypt kadhi reS SD uye unogona kuwana zvese izvo.
Chengetedza yako faira mafaera uye maapuro muakachengeteka Folder: Kana iwe uchinetseka nezve vanhu vari kuwana yako foni uye nekuwana zvinhu zvavasingafanirwe, unogona kushandisa iyo Yakachengeteka Dhairekitori. Izvi zvinogadzira imwe nhanho yekuchengeteka, iwe unogona kubva wedzera mafaera, mifananidzo uye maapplication aunoda kuramba akavanzika - izvo zvinogona kuve chero chinhu kubva kune ako mapikicha kune zvinyorwa zvebhizinesi. Iwe unogona zvakare kuwedzera yechipiri shanduro dzeapps aunoda akachengeteka uye zvakavanzika. Zviri muzvirongwa> biometric uye chengetedzo> yakachengeteka dhairekitori.
Samsung Galaxy S20 kuratidza matipi
Samsung ikozvino pazera rechipiri reInfinity-O inoratidzira uye pane iyo Galaxy S20 nhepfenyuro pane ikozvino sarudzo ye120Hz.
Engage 120Hz maitiro: Iko kune sarudzo ye120Hz kana 60Hz paS20. Musoro muzvirongwa> kuratidza> kufamba kwakanaka. Izvi zvinokutendera kuti utore, iine 120Hz ine chinangwa chekuita kuti zvinhu zvinyatsonaka. Inongowanikwa chete pa Full HD + resolution (zvakare yakasarudzika), asi zvakare inoshandisa upenyu hwakawanda hwebhatiri pane kunamatira ku60Hz.
Shandura iyo resolution resolution: "Quad HD +" ivo vanodaro, asi iyo yakasarudzika ndeye "Yakazara HD +". Iwe unogona kusarudza iyo resolution yaunoda iyo yekuratidzira mune zvigadziriso> kuratidza> resolution yechiso. Kugadziriswa kwepazasi kunogona kukuserera bhatiri simba.
Shandisa maitiro akasviba: Izvi zvave zviri pamafoni eSamsung kwechinguva, asi zvakapararira zvakanyanya uye ikozvino yazvino Android chimiro. Ingo vhura iyo menyu yekumisikidza uye tungamira mukuratidzira. Ndicho chinhu chekutanga chaunoona kumusoro kwepeji, asi iwe unogona kubata pa "rima modhi maseru" uye iwe unogona kuronga yerima modhi kuti uuye pakuvira kwezuva.
Shandura mavara ekuratidzira: Musoro muzvirongwa> screen mode uye iwe unowana iyo sarudzo yekuchinja maitiro anotaridza. Iko kusarudzika kwakajeka nesarudzo yekuita kuti ive yakasikwa. Mukati meyakajeka iwe unogona kushandura iyo tembiricha tembiricha uye iyo RGB marongero, kana iwe uchida.
Vhura vhidhiyo inowedzera: Pane vhidhiyo inosimudzira yakavanda paS20 iyo ine chinangwa chekusimudzira mavhidhiyo. Inoshanda neakawanda maapplication, anosanganisira Netflix, Play Mafirimu, Prime Vhidhiyo uye YouTube. Musoro muzvirongwa> zvemberi maficha> vhidhiyo yekuwedzera kuti uibvise kana kuvhara zvinoenderana nezvaunoda.
Vhenekesa bhuruki rechimwenje. Izvi zvinoshandura ruvara rwechiratidziro kudzikisa mwenje webhuruu, kudzivirira kunetseka kwemaziso uye kukubatsira iwe kurara zvirinani, notionally. Musoro muzvirongwa> kuratidza> bhuruu mwenje firita kuti uchinje nguva uye simba remhedzisiro.
Viga kamera yekumberi: Kana iwe usingade kamera kumberi, iwe unogona kuiviga mune rakasviba bhenji. Zvinoreva kuti foni yako inozobva iine bezel yepamusoro. Musoro muzvirongwa> kuratidza> yakazara skrini maapp. Vhura menyu kuti ubudise akwirisa epamberi. Pano iwe unowana yekuchinja sarudzo yekuvanza kumberi kamera, kana ichikunetsa.
Mamwe-ruoko maitiro: Musoro muzvirongwa> zvemberi maficha> imwe-ruoko modhi uye iwe unowana iyo sarudzo yebhatani kana chiratidzo chekugonesa imwe-ruoko modhi. Izvi zvinofanirwa kutenderedzwa pairi, asi zvinodzikira iyo kuratidza kuti ikupe nyore kuwana zvinhu zviri padyo nepamusoro - zvakakura kwemaoko mashoma pamafoni makuru. Kamwe mune imwe-ruoko modhi, unogona kuchinja kubva kuruboshwe uchienda kurudyi nekukanya miseve. Kuti ubude imwe-ruoko modhi, tora chete pane nhema nzvimbo.
Samsung Galaxy S20 akateedzana notices matipi uye manomano
Samsung inoda kukuzivisa iwe nguva dzese, saka kudzora iwo maziviso uye kuvaita kuti vaite zvaunoda chikamu chikuru chekugara nefoni yemazuva ano. Samsung inowanzo gadziridza zvese kuziviswa nezwi rayo uye kudedera, saka pane zvakawanda zvekusarudza kuti zviitwe. Isu takafukidza zvimwe zviziviso mune yekuvharira chikamu chikamu pamusoro, asi aya ndiwo maitiro ekubata pane ese iwo mabheepi uye mabhuru.
Kudzima zviziviso zveapuro: Endai kumasethingi> zviziviso uye muchaona "ichangotumirwa" chikamu. Tinya "ona zvese" uye iwe unowana zvirinyore kushandura sarudzo dzese maapps pafoni yako. Pano unogona kuvavhara zvachose, kana kubaya kuti udzore mamwe ma ziviso.
Ratidza mabheji eiyo icon yeApp: Icon mabheji chinhu cheApple, ichirega yega yega app ichikuratidza kuti mangani ma ziviso aunazvo. Samsung inoisa izvi pane chishandiso chose. Musoro muzvirongwa> zviziviso> app icon mabheji. Unogona kushandura kana kudzima sarudzo, kana kuti tapira kuti uchinje maitiro (nhamba kana nhamba dzisina). Kana iwe ukabaya pane app pachinzvimbo, unogona kudzima madhivi eimwe chaiyo app.
Wona ziso rako rekuzivisa nefoni refu pakapurogiramu yeapp: Uku ndiko kuwedzera kwekuwedzera kwemabheji emifananidzo. Iwe unogona kudzvanya uye kubatirira pane icon yeapps iri kuratidza bheji uye zviziviso zvicharatidzwa mune pop-up menyu. Musoro muzvirongwa> zviziviso> app icon mabheji uye iwe uchawana iyi sarudzo pazasi pepeji pasi pe "notices on app icons".
Regedza ziviso yawakagamuchira: Ichi chikamu cheyakajairwa Android chimiro, asi chinonyanya kubatsira. Kana iwe ukawana chiziviso kubva kune chero app uye iwe haumbofi, wakamboida kuiona zvakare, zvishoma nezvishoma swipe ziviso kurudyi uye iwe uchaona yekugadzika cog. Tinya pane izvo uye iwe uchaona sarudzo yekudzima zviziviso zveiyo app.
Samsung Galaxy S20 vhoriyamu inodzora, inonzwika uye usakanganise
Kudzidza kugona kusakanganisa hunyanzvi hwekushandisa hweApple. Unogona kuiwana kuti ikupe zviyeuchidzo zvaunoda paunenge uchizvida, unogona kunyararidza foni yako kana iwe uchida usingade chinongedzo chinotsvedza, asi zvakadaro rega izvo zviyeuchidzo zvakakosha kuburikidza. Pane iyo Galaxy S20 iwe une mashanu vhoriyamu anotsvedza. Ndizvozvo, mashanu: ringtone, midhiya, zviziviso, system, Bixby izwi.
Vhura bhuku rezvinhu zvese: Rarama chinyorwa chinopa system-wide chipiro icho chinokupa iwe macaption evhidhiyo maapplication. Iri kuvanda mumagetsi ekudzora. Ingo tora vhoriyamu kumusoro kana pasi uye kana icho chinotsvedza chaonekwa, tinya iyo yekudonha pasi museve. Izvi zvicharatidza ako ese evhoriyamu ekudzora, asi pazasi pechinyorwa iwe uchaona iyo sarudzo yekubatidza mhenyu chinyorwa.
Tarisa uone vhoriyamu vhidhiyo yekuchinja: Mukati megadziriro evhoriyamu (swipe pasi vhoriyamu kana muzvirongwa> kurira uye kudedera) iwe unowana sarudzo yekushandisa vhoriyamu makiyi enhau. Izvi zvinodzimwa nekutadza, asi kana iwe ukaibatidza, ipapo kana iwe ukadzvanya mabhatani evhoriyamu, chete midhiya vhoriyamu inofamba. Siya iyo uye inodzora ringer vhoriyamu, asi inoshandura kune midhiya vhoriyamu kana iwe uine midhiya inotamba, semuenzaniso muNetflix kana Spotify.
Chinja huwandu hwe vibration kune zvese: Musoro muzvirongwa> kurira uye kudedera> kudengenyeka kwekuwedzera uye iwe unogona kushandura iwo mazinga ekudengenyeka emafoni, zviziviso uye kubata.
Kurumidza kuchinja kuti unamate ziviso: Kana iwe uchida kunyarara, asi mushure mekudzidimikira kunyevera kuchine, pusha bhatani rezwi uye tapa icon yemutauri pane pop-up. Izvi zvichachinja kuti vibrate. Kana iwe unogona kubata pasi bhatani bhatani saka rinotsvedza nzira iyo yose pasi kuti ibvute.
Isa foni yako kuti inyarare: Izvo zvakajairika vhoriyamu zvinodzora zvinongoenda kudedera. Kuita kuti foni yako inyarare, tsvaira pasi kune inokurumidza marongero uye tora iyo pfupi nzira yekurira. Izvi zvinotenderera kuburikidza nezwi / vibrate / mbeveve. Rangarira kudzosera ruzha kumashure, kana kuti ucharasikirwa nhare dzako dzese uye mameseji, kana kushandisa usavhiringidze pane kudaro.
Dzima ruzha rwekuchaira, kusunungura ruzha, keyboard kurira: Samsung yaizove neyako Galaxy beep uye kudedera pane zvese zviito nekubata. Musoro muzvirongwa> kurira uye kudedera> system kurira / kudedera kudzora uye iwe unowana dzese sarudzo dzekudzima zvinhu izvi. Zviite, ndapota.
Gonesa uye kudzora Dolby Atmos: Izvi zvinogona kutenderedzwa mukati nekukurumidza marongero, kana musoro muzvirongwa> kurira uye kudedera> ruzha mhando uye mhedzisiro. Mukati mechikamu cheDolby Atmos iwe une sarudzo yemota, bhaisikopo, mumhanzi kana izwi senge sarudzo dzekusimudzira odhiyo. Iko zvakare kune sarudzo yekungova neAtmos otomatiki batidza paunotanga mutambo.
Shongedza ruzha rwemhando yacho kwauri: Unogona kugadzirisa kurira kwekuburitsa kubva kumidziyo yeS20. Musoro muzvirongwa> manzwi uye kudedera> ruzha mhando uye mhedzisiro uye iwe uchaona "chinja ruzha" pasi kuti pasi. Unogona kutora zera-rakavakirwa mbiri kana iwe unogona kugadzira yakasarudzika marongero zvichienderana nekfupi yekuteerera bvunzo.
Shanda usakanganise: Usavhiringidze chinhu cheApple icho chinokutendera kuti unyaradze foni yako, asi gadzira huwandu hwezvakasiyana. Svetera pasi nekukurumidza marongero uye tora iyo usakanganisa bhatani kuti ubatidze. Iwe unogona zvakare kuiisa kune iyo purogiramu, semuenzaniso husiku, kana kana iwe uri muhofisi. Ingotinyaira uye ubatise iyo yekumisikidza nekukurumidza kuti uwane iyo yakazara menyu sarudzo.
Bvumira maaramu uye kunze mune usakanganise: Kana iwe uchida kunyarara saka usakanganisa zvakanaka. Asi kana iwe uchida zvimwe zviziviso, saka unofanirwa kuratidza izvo zvinosara zvinotenderwa. Musoro muzvirongwa> kurira uye kudedera> usakanganisa> tendera kunze. Pano iwe unogona kubvumira maalarm (akakosha kana iwe uchida kumuka mangwanani), asi zvakare tendera vanodzokorora vafona kana vakadomwa meseji - senge vanofarira meseji uye mafoni - pamwe nezviyeuchidzo. Izvo zvakakosha kutarisa izvo zvinogona kupfuura uye izvo zvisingakwanise.
Bvumira zviziviso mukati kuti zvisakanganise: Nepo ruzha uye kudengenyeka zvanyararwa mukati hazvivhiringidze, iwe unogona kunge uine ziviso dzakanyarara. Mune masetingi> kurira uye kudedera> usakanganisa> kuvanza zviziviso iwe unowana sarudzo dzekubvumidza kana kumisa zviziviso. Viga zvese zvinoreva kuti hapana chinoonekwa, asi iwe sarudza - unogona kudzima mabheji emifananidzo, rondedzero yezviziviso, pop-ups uye mamiriro ebar bar.
Samsung Galaxy S20 kamera uye mapikicha emifananidzo
Makamera ari paS20 uye S20 + akasiyana zvakanyanya neS20 Ultra - asi pane zvakawanda zvavakafanana uye zvakawanda kuti vabate. Heano maitiro ekutora kutonga kweiyo kamera.
Shandisa iyo 108MP modhi (S20 Ultra chete): Iyo S20 Ultra ine 108-megapixel kamera, asi nekumisikidza yakagadzirirwa 12-megapixels. Kana iwe uchida iyo yakazara resolution, tinya iyo factor ratio bhatani mune iyo yekuona uye iwe uchaona iyo "4: 3 108MP" sarudzo.
Vhura 8K vhidhiyo yekutorwa: Kana iwe uchida kutora vhidhiyo mune yakanyanya resolution, tungamira muvhidhiyo modhi uye tinya iyo factor ratio icon - iwe uchaona sarudzo ye16: 9 8K. Iwe unorasikirwa nezvimwe maficha pane ino resolution - hapana epamberi maficha, ingori 8K kubatwa.
Shandisa usiku maitiro ezvepamusoro mwenje wepazasi shoti: Samsung yakagadziridza yakaderera mwenje kupfura zvese zviri zvakajairwa kamera uye nehusiku modhiyo. Kana kwasviba kamera inokuratidza kuti ushandise nzira yemanheru - tinya pane ziviso Kana, tungamira mumhando dzekupfura uye tora nzira yemanheru. Kana uchipfura mumwenje wakadzika, chengetedza kamera kuti igadzikane sezvinobvira, kusvikira mwedzi mudiki mubhatani re shutter wazadzwa yero.
Tora mufananidzo uri nani weMacro: Kuvhurika kwese kwemakamera eS20 kunoreva kuti zvinhu zviri padyo zvinogona kutaridzika zvakapoterera kumucheto. Izvi zvinokonzereswa neiyo f / 1.8 aperture. Tora nhanho kumashure uye ushandise iyo telephoto pachinzvimbo - iyo yakatetepa f / 3.5 (pane iyo S20 Ultra) kana f / 2.0 (paS20) inogona kuwana yakawanda yepedyo-renji nyaya mukutarisa.
Shandisa Imwe Kutora yezvidzidzo zvinofamba: Kana iwe uri kutarisa chimwe chinhu chinonakidza chiri kufamba-famba, senge mutambi mumugwagwa kana pamwe imbwa yako, Imwe Tora inogona kutora yakatarwa mifananidzo uye vhidhiyo yako. Cherechedza: Imwe chete Tora haitore ruzha ichiisa yayo ruzha pamusoro pevhidhiyo.
Nzira yekubuda sei mumamera kamera: Kana iwe ukaona iwe wakanamatira mumamera modhi uye usingazive maitiro ekudzoka, tsvaga museve wekumashure mukona yekuruboshwe yefoni. Izvi zvinodzokera kune yakajairwa yekutarisa.
Dzima yekupedzisira-wide angle kukanganisa kudzora: Paunotora pikicha ine Ultra-yakafara kamera, software inogadzirisa kumwe kukanganisa kunouya nayo. Iyo inogona kunge iri tambo yakatwasuka yakakombama kana isingafanire kuve, semuenzaniso. Kana iwe uchida kuti foni isingaite izvozvo, tungamira mumakamera macamera> chengetedza sarudzo uye iwe uchaona sarudzo yekuidzima.
Vheneka maitiro ekupfura: Chinhu chakaunzwa paS10, chichaongorora chiitiko uye nekurumbidza chimiro chakanakisa. Iyo kamera inoratidzira yakanakisa kupfura iwe yaunogona kutora uye nekukubatsira iwe kuimisa iyo kumusoro uchishandisa gwara pane iyo skrini. Vhura kamera uye tora zvinongedzo cog kumusoro uye iwe unowana sarudzo yekutendeuka.
Shandisa chiitiko chinogadzirisa mifananidzo yako: Iyo nyowani yechiitiko optimiser inoshandisa AI kunatsiridza ako mapikicha, pamwe nekubvumidza yakareba yakabata ruoko mapikicha. Mune iyo yekutsvaga muiyo kamera app iwe uchaona swirly icon mune imwe kona. Kana iri yebhuruu ipapo optimiser yemwenje yakavhurwa uye inozoona iyo nzvimbo uye inosarudza akanakisa marongero ako. Kana pasina chiratidzo cheswivly, tungamira mumamera macamera uye shandura pane optimiser yechiitiko. Iwe zvakare unowana sarudzo yekutora mashandiro ayo muchikamu chimwe chete.
Kurumidza kuvhura kamera: Nokusingaperi, muchina wekudhinda wakapetwa pane bhatani repadivi unovhura kamera Kana iwe uchida kuchinja izvi - sekutaura kwatakaita kune epadivi makiyi ekudzivirira pamusoro - musoro muzvirongwa> zvemberi maficha> parutivi kiyi uye iwe unowana izvo zvinodzora.
Chinja macamera kamera: Iyo kamera inotakura uye iwe unogona kusvetuka kuburikidza nema modes kubva pamufananidzo, uchisvetuka kuburikidza nema modes aunozoona kurudyi kana pasi. Chaizvoizvo iwe unogona kusvetuka pamwe neiyo runyorwa, uchifamba kuburikidza kamwe chete kutora, foto, vhidhiyo, zvimwe. Unogona kusveta pane yekuratidzira kamera kuti ufambe nenzira idzi. Mune zvimwe iwe unowana mamwe mabasa, sepro (manual control), husiku, kurarama tarisa, hyperlapse zvichingodaro.
Rongedza nzira dziripo kamera: Haufanire kunamatira pane zvakasarudzika sarudzo pamusoro - iwe unogona kuwedzera kana kubvisa nzira dzaunowana dzichinyanya kubatsira. Musoro mu "zvimwe" uye iwe uchaona penzura inoonekwa pazasi. Tinya izvo uye zvinokutendera iwe kudhonza iwo ma modhi aunoda pane iyo runyorwa, kuti iwe ugone kuvasarudza zviri nyore pasina kuvhura iyo "yakawanda" menyu nguva dzese.
Nokukurumidza chinja kubva kumashure neshure kamera: Pane bhatani rekuchinja pakati pemberi neshure kamera, asi iwe unogona zvakare kuzviita neswipe. Ingo tsvaira kumusoro kana pasi pechiratidziro kuchinjira kune imwe kamera. (Chaizvoizvo, swipe munzira yakatarisana neiyo inoshandura iyo yekupfura nzira seyapamusoro.) Kana, iwe unogona kupeta kaviri bhatani remagetsi zvakare uye kamera dzinochinja.
Gonesa kuburitsa kwakabikwa: Kana iwe uchida iyo dng mafaera akachengetedzwa pamwe neyakajairwa jpeg, tungamira mukati mezvisarudzo> chengetedza sarudzo. Heino sarudzo yekuchengetedza ese ari maviri uye jpeg mafaera. Kuti uishandise iwe uchafanirwa kunge uri muPro modhi, zvisinei, saka kana iwe uchida mafaera akasvinwa, tendeuka wobva wapfura muPro - iwe zvakare haugone kuchinjira ku108MP mune iyi modhi, saka haugone kuwana iyo hombe faira mbishi.
Ita kuti vhidhiyo isimbe: Kuti ugadzikise vhidhiyo yako pakamera yekumashure, ingo bata iyo icon kuruboshwe neruoko uye wiggly mitsara Izvi zvinotendeuka pane yakatsiga modhi. Yero kana yakavhurwa. Iwe haugone kuve wakadzikama kwazvo pa8K vhidhiyo.
Kupfura muHDR10 + vhidhiyo: HDR10 + ndeye beta (kana "labs") chimiro. Tungamira mumavhidhiyo modhi uye wozovhura macamera makamera> epamberi ekurekodha mabasa. Unogona kuchinja paHDR10 +, asi yambiro kuti unogona kungoona avo vari paHDR10 + inowirirana, kana zvisina kudaro vanongoita kunge vhidhiyo yemhando yepasi. Iwe unogona zvakare kutora HDR10 + pa1080 / 30p, kwete iyo yakazara huwandu hwesarudzo iyo kamera inopa.
Tora mufananidzo we selfie: Panzvimbo pekupa iyo portrait mode, Samsung inopa "live focus", inozovhiringidza kumashure. Ingo chinja kumberi kamera uye sarudza live tarisa kubva kumenyu. Kune mana akasiyana bokeh mhedzisiro yekuedza. Ziva kuti kutsetseka kweganda kwakashandurwa pane yangu yekumisikidza, saka tora iyo wand icon kana iwe uchida kuita shanduko.
Shandisa AR Emoji: Iyi ndiyo mamiriro pamusoro pemenu. Ichakutendera iwe kutora emoji ndiwe kana kushandisa akasiyana maAR mavara. Ingo tora AR emoji uye unakirwe.
Kutora refu kuratidzwa foto: Vhura iyo Pro modhi. Kurudyi-kurudyi / pasi iwe uchaona sarudzo yekushandura kureba kwekuratidzwa nechiratidzo chinotaridzika senge kamera shutter. Shandisa chinotsvedza kusarudza urefu hwenguva yaunoda. Chiratidzo chekubhadhara muripo chinoratidza kana iwe uchizoenda pamusoro kana pasi pekufumura, nekuchinja kubva + kuenda -.
Chinja gallery maonero: Kana iwe uri kutarisa ako mapikicha uye iwe uchida zvimwe kana zvishoma pane zvinoratidzwa, iwe unogona kupinza zoom, kuti uchinje iyo thumbnail maonero.
Samsung Galaxy S20 kumucheto kwetimuti matipi
Kubva Samsung payakaunza iwo mativi pane iyo infinity kuratidza, yanga ichiedza kutsvaga zvinhu zvekuita nayo. Kana iwe usiri kuda chero eiro basa, unogona kudzima zvese.
Wedzera kana bvisa pamipendero mapaneru: Musoro muzvirongwa> kuratidza> kumucheto skrini uye pombi pamipendero mapaneru. Pano iwe uchaona kusarudzwa kwemapaneli aripo uye iwe unogona kuwedzera uye kubvisa iwo ausingade. Namatira kune zvinobatsira, zvikasadaro iwe uchapedza yakawanda nguva uchifamba uye shoma nguva uchiita. Smart sarudza yakakodzera kuongorora.
Fambisa mupendero wedanga remupendero kune chero kwaunoda: Unogona kufambisa mupendero mubato (kwaunofanirwa kuswipe kuti uvhure iwo mapaneru) kune chero kuruboshwe kana kurudyi rwechidzitiro. Ingodzvanya uye bata uye unogona kuidhonza kwaunoda. Kana iwe usiri kuda kukwanisa kuifambisa, unogona kudzima iyo sarudzo mumasetwork, sezasi.
Shandura ukuru uye pachena kwema mupendero paneleti mubato: Musoro muzvirongwa> kuratidza> kumucheto skrini> pamupendero mapaneru. Wobva wadzvanya pane iyo menyu mune yepamusoro kurudyi-kona kona uye sarudza "bata zvigadziriso". Mukati meaya marongero unogona kushandura mubato - kusanganisira kuuita usingaonekwe, kushandura ruvara, saizi uye kana iwe uchida kuti uteteme kana wabatwa.
Gonesa magetsi kumucheto kweziziviso: Iwe unogona kuve nemipendero yechiratidziro mwenje kumusoro kuti ikupe iwe ziviso. Musoro muzvirongwa> kuratidza> kumucheto screen> kumucheto mwenje. Iwe unogona kushandura iwo maratidziro emucheto mwenje pamwe nekudoma ayo maapplication aachazokuzivisa iwe nezvazvo. Iwe unogona kuzviisa pazvinhu zvese, kana chete iwo maapplication aunofarira kwazvo.
Dzima kumucheto chidzitiro: Musoro muzvirongwa> kuratidza> kumucheto skrini uye bvisa pamucheto mapaneru. Ivo vanozoendeswa kune bhakiti remabasa iwe rausingamboshandisa.
Bixby matipi uye manomano
Bixby mubatsiri weSamsung. Yakagadzira kutanga kwayo paSamsung Galaxy S8 muna 2017 uye yakazoonekwa mumafoni akatevera. Iye AI mubatsiri anogona kuita hwakawanda hwezvinhu, asi zvakanyanyisa kuputswa muBixby Voice (iine yayo skrini) uye Bixby Vision. Isu takafukidza mamwe maBixby Izwi matipi mune echidijiti vabatsiri chikamu chiri pamusoro. Kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezveBixby, isu tine yakazara Bixby chimiro chekuti unakirwe.
Gadzira Bixby Routine: Musoro muzvirongwa> zvemberi maficha> Bixby Maitiro uye iwe uchawana iyi sarudzo. Izvi zvinokutendera iwe kumisikidza dzakasiyana Kana uye Ipapo mabikirwo. Semuenzaniso, kana iwe uchienda kunze kwenyika, bvisa nharembozha. Iwe unogona kugadzira tsika tsika dzakatenderedza kuvhura iyo app, iri yakanaka kumitambo, semuenzaniso.
Shandisa Bixby kuwana zvigadziro pafoni yako: Chimwe chezvinhu zvinoyevedza pamusoro peBixby ndechekuti inogona kushandiswa kuwana zvigadziro pafoni yako. Dzvanya uye bata Bixby kiyi uye Izwi rinotanga kuteerera, wobva wataura zvaunoda kuchinja pane foni yako.
Shandisa nekukurumidza mirairo kuchinja mamiriro efoni yako: Pane huwandu hwemirairo inokurumidza inochinja foni yako kune mamwe marongero, sekutyaira, semuenzaniso. Ivo vanozokutendera iwe kuti ushandise Bixby Voice kuvabvumira mune imwe flash. Vhura Bixby kuburikidza bhatani, swipe kumusoro kuti uvhure iyo huru Bixby peji, vhura iyo menyu kumusoro kurudyi uye iwe unowana "nekukurumidza mirairo". Pano iwe unomisa izvo zvaunoda kuti zviitike kana iwe ukataura chimwe chinhu. Zvakafanana neBixby Routines asi yezwi.
Iva neBixby chete inopindura kana yakabatana neBluetooth kifaa: Izvi zvinonakidza. Musoro muBixby marongero> mhinduro yezwi uye iwe uchawana sarudzo yekuona kuti Bixby inopindura chete nezwi kana yakabatana nechigadzirwa cheBluetooth. Inoita kuti ive yakanakira kudzora-maoko kudzora, mumotokari semuenzaniso.
Shandisa Bixby Vision kududzira: Vhura kamera uye iwe unowana iyo Bixby Vision mumamodhi kamera. Tinya iyo uye ichavhura Vision. Nekuda kwayo yakagadzirirwa kuverenga mabhaudhodhi nekutenga - asi vhura menyu uye iwe uchawana sarudzo yekuvhura kududzira, izvo zvinonyanya kubatsira. Ipapo ichawana iwo mavara uye akararama anodudzira iwo mavara iwe.
Samsung Galaxy S20 uye S20 + skrini
Tora mufananidzo: Dzvanya vhoriyamu pasi uye mabhatani akamira panguva imwe chete. A skrini ichabatwa.
Palm swipe ye skrini: Kana iwe usiri kuda kumanikidza mabhatani kuti utore skrini, tungamira muzvirongwa> zvemberi maficha> mafambiro uye nemasaini uye batidza chanza swipe kuti ubate. Izvi zvinokusevha iwe uchifanira kudzvanya mabhatani maviri kamwechete. Inofanira kunge iri yekutadza.
Shandisa smart Capture: Samsung inokupa iwe dzimwe sarudzo dze screenshots. Musoro muzvirongwa> zvemberi maficha> mafambiro uye nemasaini> smart kubatwa. Izvi zvinorega iwe uchitsvaga kuti uwane yakawanda peji, nekukurumidza kugadzirisa uye kugovana sarudzo zvakare. Zvakanaka pakubata mapeji ewebhu akazara. Kune zvakare tag tag jenareta inozoongorora mufananidzo uye nekupa ma tag ekuwedzera kune iyo.
Capture gif from the screen: Unogona kugadzira chipo ipapo kubva pane chero chinhu chiri kutamba pafoni yako, kunge vhidhiyo muTwitter, Instagram kana YouTube. Bvumira iyo smart kusarudza Edge pani. Zvino, kana vhidhiyo yako yave kuratidzwa, Rova zvakasimba kuti akangwara sarudza kubva kumucheto uye sarudza kuchangamuka. Hwindo rekutarisa richaonekwa iro rinokutendera kuti utore vhidhiyo kuti ugadzire gif.
Samsung Galaxy S20 bhatiri matipi
Iyo Galaxy S20, S20 + uye S20 Ultra ine mabhatiri makuru - 4000mAh, 4500mAh uye 5000mAh zvichiteerana. Asi ivo zvakare vanopisa kuburikidza navo nekukurumidza. Heano maitiro ekuti uwane zvakanyanya kwavari.
Dzima iyo 120Hz kuratidza: Iyo yekutsanya yekuvandudza mwero inodya yakawanda bhatiri, saka kana iwe uri kunetseka, wobva wadzima. Mirairo iri muchikamu chekuratidzira pamusoro.
Chinja kuzere HD +: Iyo ndiyo yekumisikidza kuseta kwefoni dzeSamsung kwechikonzero - nekuti resolution dzakakwira dzinodya hupenyu hwakawanda hwebhatiri. Zvekare, iwo mirairo iri pamusoro, asi musoro kumaseteni> kuratidza uye iwe uchawana sarudzo.
Vheneka nzira yakasviba pane yako sosi: Pane humwe humbowo hwekuti kushandisa rima modhi inoderedza simba iro foni inoda kujekesa vese vachena kumashure. Zvekare, zviri muzviratidziro.
Bvisa maficha ausiri kushandisa: Nhare dzeSamsung dzinouya dzakazara zvizere nezvimiro uye hausi kuzoishandisa dzese. Muzviitiko zvakawanda unogona kudzima ivo. Izvi zvinogona kusanganisira zvese zvine chekuita neBixby, NFC, yechipiri SIM kadhi slot, mapaneru mapaneru, kuvhenekera kumucheto, ese maazizi ekudedera.
Wona zviri kudya bhatiri: Musoro muzvirongwa> kuchengetedza mudziyo uye pombi bhatiri. Izvi zvinokuratidza iyo yakafanotaurwa bhatiri kushandiswa kunoenderana neyako manomwe-mazuva mavhareji, uye nekukata iyo "bhatiri kushandiswa" kuchakuratidza iwe chii chiri kushandisa kumusoro iro bhatiri.
Tarisa nhoroondo yako yekushandisa yebhetri: Pane peji rekushandiswa kwebhatiri rakatsanangurwa pamusoro apa, unogona kupfura kuburikidza negirafu kuti uone kuti kushandisa kwako kwakange kuri kupi pamazuva manomwe apfuura. Kupurudzira pasi peji kucharatidza maapplication ayo ainyanya kushandisa bhatiri.
Manage simba rekuchengetedza simba reapp Mukugadzika> kutarisirwa kwechishandiso> bhatiri iwe unowana manejimendi simba rekushandisa. Pano unogona kusarudza kuisa mamwe maapps ekurara kana iwe uchifunga kuti vari kushandisa rakawandisa simba kumashure. Semuenzaniso, kana Amazon Alexa inoita kunge iri kushandisa bhatiri kumashure, unogona kusarudza kudzora iko kumashure kuwana. Chenjera kunyange - mamwe maapplication anogona kusashanda sezvaunotarisira kana ivo vakarara.
Shandisa simba rekuchengetedza simba: Chero rova ​​nzira ipfupi mukumisikidza nekukurumidza, kana musoro muzvirongwa> kutarisirwa kwechishandiso> bhatiri. Pano iwe unogona kushandura iyo modhi yemagetsi uye nekuita yepakati kana yakanyanya kuchengetedza bhatiri, nesarudzo yekushandura marongero emhando yega yega. Iwe unogona zvakare kusarudza yekugadzirisa magetsi ekuchengetedza.
Shandisa Wireless PowerShare: Iyo Samsung Galaxy S20 inogona kudzosera kubhadharisa zvisina waya. Pane yekumhanyisa marongero ekuchinja ebasa iro rinorega iwe ubhadhare chimwe chishandiso paunodzidzosera kumashure. Ingo bata bhatani uye wozoisa chimwe chigadzirwa kuseri kweGPS S20 ive iyo Samsung Buds + kana iPhone kana chero imwewo Qi kifaa.
Ita kuti kukurumidza kuchaja: Musoro muzvirongwa> kuchengetedza mudziyo> bhatiri> kuchaja. Pano iwe unowana ma toggles emari dzakasiyana dzekuchaja.
Nguva kusvika yakakwana kwazvo: Nguva yekuchaja inoratidzwa kana yakabatana nechaja. Tarisa pazasi pekiyi yekuvharira uye mune yebhatiri chimiro mamiriro. Kana iwe uchikurumidza kuchaja, ichataura kudaro, uye nguva inofungidzirwa yasara.
Samsung Galaxy S20 ongororo: Imba iripedyo-yakakwana, yehomwe-inoshamisira simba
Filed Under: bat tinh nang lay net vung tren t20